Farmaajo Xaq ma u leeyahay inuu ka hadlo 26ka June, waajibse ma ku tahay inuu barto taariikhda Somaliland ? By: Cali Xaruuri | Togdheer News Network
Farmaajo Xaq ma u leeyahay inuu ka hadlo 26ka June, waajibse ma ku tahay inuu barto taariikhda Somaliland ? By: Cali Xaruuri
Markaad guurtay bay leeyihiin, ina galaalow“.
Haddaba waxay ahayd ninkan AKAAKADA ah ee Cabdi Xaashi (gudoomiyaha Maqaar Saarka ah ee qalka Sare ee Somalia) inuu Farmaajo ku yidhaahdo “waar ka baydh adigu 26ka June ma taqaanide, 1da July ka khudbadee anigaa tan ka khudbadeynaye”e. Xiniinyo la isma dhibaadsho, ragga ka soo jeeda Somaliland ee u shaqa tegay Somalia waa rag bahdii laga saaray oo dadnimo iyo damiirba aan lahayn.